ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7တစ်နေ့စွဲသည်လုံးဝ Unique အကြံဉာဏ်များ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဇူလိုင်. 05 2020 |3မိဖတ်ပြီးသား
ချိန်းတွေ့, ငါတို့သည်အချို့သောသူသည်ကောင်းသောရက်စွဲများအားလုံးကြုံတွေ့ခဲ့ရပြီ, တချို့မှိုင်း / dreary သူများ, အချို့သောရွားလှလွန်းကိုခံထိုက်ပေသူများနှင့်မျှော်လင့်တချို့အတွေးတွေ / စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့သူများအောက်မှာ. ဒါနဲ့ဘာနေ့စွဲအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ကို? ၏သင်တန်းကိုသင်တွေ့ဆုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူတို့နှင့်အတူလုပ်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်, သို့သော်ငါထက်ကပိုလည်းမရှိစဉ်းစား. ငါတကယ်ရက်စွဲတစ်ခုထွက်မတ်တပ်ရပ်စေနိုင်သည်ဟူသောအရာသည် Shared ထင် အတွေ့အကြုံ သင်အတူတကွရှိသည်, နှင့် connection ကိုဒီဆောင်တတ်၏.
တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတွေအတွက်ဘားသို့မဟုတ်အရက်ဆိုင်တွင်တွေ့ဆုံအလွန်clichéဖြစ်ပြီးမုန့်ညက်ရှိခြင်းနေတုန်းကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, သင်ပြုသည့်အခါကသင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူနေ့စွဲညဉ့်အပတ်တိုင်းပျင်းစရာကောင်းနေရနိုင်. တကယ့်အရာတစ်ခုခုကိုပျော်ရွှင်စရာနှင့်အပေါ်၌လက်ကိုလုပ်ဖို့သာလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ကတက်မြိန်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲတစ်ခုသို့မဟုတ်ပုံမှန်အပတ်စဉ်ထုတ် '' ရက်စွဲညရှိမရှိ.
သင် shared အတွေ့အကြုံများကိုလူအကြားဆက်သွယ်မှုကိုဖန်တီးသည်ကိုသိရခဲ့ဘူး? ဒါဟာဤကဲ့သို့သောအလုပ်ဖြစ်တယ်. သင်သည်အတွေ့အကြုံမဆိုအမျိုးအစားရှိသည်သောအခါသင်သည်အစကနှင့်အတူသွားသောစိတ်ခံစားမှုကိုရလိ​​မ့်မည်ဟု. သင်ကကမ်းပါးကိုချွတ် abseil လျှင်ထိုဥပမာသင်ဖြစ်ကောင်းအချို့သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုသည်ကိုတွေ့ကြုံခံစားကြမည်, ဖြစ်ကောင်းကြောက်မက်ဘွယ်, adrenaline နှင့်မြင့်မားသော. အခုဆိုရင်ကျနော်တို့နောက်ထပ်လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး shared အတွေ့အကြုံရှိသည့်အခါ, ကျွန်မတို့အတူအလားတူစိတ်ခံစားချက်တွေကိုတဆင့်သွားကြသည်, ဤတစ်နှောင်ကြိုးဖန်တီးပေး. တဦးတည်းအရာတစုံတခုအကြောင်းမူကား, ငါတို့သည်အချင်းချင်းဆက်စပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ပြောဆိုရန်တစ်ခုခုများရှိနိုင်ပါသည်, သို့သော်အမျိုးသမီးများနှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင်သာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. အမျိုးသမီးတစ်ဦးက Shared ရှိသည်လာတဲ့အခါ (ကောင်းကျိုးသို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်) တစ်စုံတစ်ဦးကိုခေါ်ဓာတုနှင့်အတူအတွေ့အကြုံ oxytocin တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေကောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လာတယ်. ဤအ Bond ဟော်မုန်းဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့နှင့်အတူအတွေ့အကြုံရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုအနီးကပ်ခံစားရစေပါလိမ့်မယ်. စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်နေမှအချို့သော adrenaline နှင့်အတူယခုစုံတွဲသည်, တစ်ခုခုပျော်စရာလုပ်နေတာကနေနှင့်အချို့သော endorphins နှင့် serotonin, ကတော်တော်လေး heady ရောနှောင်. သင်မှာဤလမ်းကိုကြည့်ရှုသောအခါ, ငါတို့သည်ချိန်းတွေ့ကြတစ်စုံတစ်ဦးလဲကျနိုင်ပုံကိုကြည့်ပါရန်လွယ်ကူသည်.
ဒါကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့ချိန်းတွေ့၏အယူအဆအားဤလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်? လွယ်ကူသော, သင်တို့ကို shared အတွေ့အကြုံဖန်တီးရက်စွဲများစီစဉ်ချင်ပြီးတစ်ဦးမှာပျော်ရွှင်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် element ကိုထည့်သွင်း. သတငျးကောငျးကပုံမှန်ပါပဲ, မော်ဒယ်ကြည့်-ရောနှောမနေသောနေ့စဉ်လူနေဆဲအတွေ့အကြုံများကိုဤမျိုးကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်. နှင့်ဤသင်သည်သင်၏ပြိုင်ဖက်အုပ်စိုးအစွန်းပေးသည်. အဘယ်မျှအစွမ်းထက်တဲ့ဆွဲဆောင်မှုအတွေ့အကြုံ၏ဤအမျိုးဖန်တီးနိုင်စေဖို့, ဆွဲဆောင်မှုတက်နေ၏ရန်နှင့်အဘယ်ကြီးမြတ်လမ်း. ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူတစ်ဦးနှင့်အတူအဆင့်မြှင့်စိတ်ခံစားမှုနှင့် Bond ခံစားရတဲ့အခါသူတို့ကိုငါတို့ရန်ဆွဲဆောင်ခံစားရ.
သင့်ရဲ့နေ့စွဲတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့တစ်ခုခုနဲ့ပျော်စရာရွေးချယ်ရာတွင်၏အခြားအကျိုးကျေးဇူးကရေခဲချိုးမည်ကြောင်း, ဒါကြောင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲင်လျှင်အထူးသဖြင့်အရေးကြီးတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်. သင်အတူတကွပီဇာချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ထွက်အလုပ်လုပ်ကြသောအခါသင်တို့ကိုကိုးရိုးကားရားခံစားနေရတယ်များများစားစားအချိန်မရှိဘူး. ထိုသို့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်နှင့်အတူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် flirty မ်များအတွက်အခွင့်အလမ်းကိုခွင့်ပြုနိုင်မည်. ဒါဟာတဲ့အခါ bar မှာရက်စွဲတစ်ခုပေါ်တွင်သင်ခဲလှ၏သိသူတစ်ဦးဦးကိုထိဖို့မကြာခဏခက်ပါတယ်, သင်အတူတကွလက်တွေ့ကျတဲ့အရာတစ်ခုခုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသို့သော်ကအများကြီးပိုလွယ်င်. သင်ပင်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်မှုများအပေါ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည်ဆိုလျှင်, shared အတွေ့အကြုံ connection ကိုဖန်တီးပေးကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့. နှင့်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုပျော်စရာဖြစ်ပြီးသင်တို့သည်ဤအရယ်မောတွေ့လျှင်သင်သည်နှစ်ခုစလုံးအနားယူရန်အထောက်အကူပြုမည်.
အတူတူချက်ပြုတ် - အတူတူချက်ပြုတ်ပျော်စရာတွေအများကြီးရှိနိုင်ပါသည်. သင်ကချက်ပြုတ်သင်ခန်းစာစာအုပ်ဆိုင်သို့မဟုတ်အိမ်တွင်တစ်ခုခုချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ် (ဒါကြောင့်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးနေ့စွဲမယ်ယူဆ).
အိုးခွက် - နောက်တဖန်ဒီ option ကိုအပေါ်တစ်ဦးကိုလက်ဖြစ်ပြီးအရမ်း sexy ဖြစ်နိုင်. ရုပ်ရှင် '' သောဝိညာဉ်တော် '' စဉ်းစားကြည့်ပါ. ထိုအခါအလွန်ကြီးစွာသောအစိတ်အပိုင်းဖန်ဆင်းသမျှ၏ပုံစံရက်စွဲနေတဲ့ keepsake ရှိလိမ့်မည် ဟူ. ဖြစ်သည်. ပဲသေချာသင့်ရက်စွဲဟောင်းနွမ်းသောအဝတ်ကိုဝတ်စေသိတယ်.
အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းနှင့်အတူလမ်းလျှောက် - ကျနော်တို့က shared အတွေ့အကြုံဖန်တီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောသင်တို့သည်များစွာသောအချိန်မရှိဘူးသို့မဟုတ်သင်အတူတကွဘတ်ဂျက်ပေါ်လမ်းလျှောက်ပါနေရင်တော့စံပြဖြစ်နိုင်. လူတွေကမကြာခဏ ပို. လွယ်ကူကြောင်းဖြေလျော့သောသူတို့သည်လှမ်းသွားရသည့်အခါပြောဆိုရန်ရှာတွေ့. တဖန်သင်တို့ကောင်းတဲ့ရှုခင်းရှိကြောင်းတစ်နေရာရာမှာရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ဒီအတွေ့အကြုံမှထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်. အစဉ်အမြဲငါရရှိခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးရက်စွဲများတစ်ယောက်ကသစ်တော၌ရိုင်းမှိုကောက်နေခဲ့သည်. ကံကောင်းတာကကျွန်မချိန်းတွေ့ခဲ့သည်လူကိုသူများစားသုံးနိုင်သောကြ၏ သိ.!
abseiling သို​​့မဟုတ် zorbing တူရဲရဲတောက်တစ်ခုခု - adrenaline junkies အဘို့ဤအမှုသည်စုံလင်၏. ပဲသေချာသင့်ရက်စွဲသင်သည်စီစဉ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုသိတယ်, သင်သွားမီကတက်သည်ဖြစ်စေ!
တိရိစ္ဆာန်ရုံကိုသွားပါ - တိရစ္ဆာန်များနှင့်အတူဘာမှမကြီးလှပေ၏. တိရစ္ဆာန်များ Petting သင့်တက်နွေးစီနှင့်အခြား petting များအတွက်စိတ်ဓါတ်များအတွက်ရနိုင်. Plus အားကအားလုံးကိုအရေးကြီးတဲ့ဟော်မုန်း oxytocin ကြောင်းလွှတ်ပေးရန်ရန်အထောက်အကူပြု.
မြင်းစီးခြင်း - မြင်းစီးကယ့်ရယ်မောစေနိုင်တယ်, စသည်သင်တို့ရှေ့မှာကကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်လျှင်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခု. တဖန်တုံ့သင်သွားမီကလူတိုင်းအတွက်မဖြစ်သကဲ့သို့သင့်ရဲ့မိတ်ဖက်စိန်ခေါ်မှုကိုတက်ဖြစ်ပါတယ်စစ်ဆေး.
အနုပညာပြပွဲ - အနုပညာကဲ့သို့သင်တို့နှစ်ဦးစလုံးဆိုပါကဤတစ်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အလွ Shared အတွေ့အကြုံအတွက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်. ဓာတ်ပုံပြပွဲလွန်းပျော်စရာရှိနိုင်ပါသည်.
မေတ္တာတော်၌7လြယ္ကူလုပ